Apple Mac ကွန်ပျူတာတွင် ယူနီကုဒ်သုံးစွဲရန်
Home // Myanmar Unicode // Apple Mac ကွန်ပျူတာတွင် ယူနီကုဒ်သုံးစွဲရန်
Last Updated on Friday, 02 September 2016 07:32
၂. ပါပြီးသား ဖောင့်ကို ပိတ်/ဖွင့် နည်း
၃. Keymagic လက်ကွက် ထည့်နည်း
ဖောင့်ရွေးချယ်ခြင်း။။ မက်ကွန်ပျူတာ အတွက် လိုအပ်သော ဖောင့်ကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါမည်။ Pydaungsu နှင့် ZawDecode ဖောင့် ၂ မျိုး ကို နမူနာ အဖြစ် ထည့်သွင်း ပါမည်။ ( ZawDecode က Windows နည်းပညာ OpenType သီးသန့် ထုတ်လုပ်ထားသဖြင့် Microsoft Office 2016 တွင်အသုံးပြုရာတွင် အဆင်ပြေသော ကြောင့် ထည့်သွင်းထားသင့်ပါသည်။ Pyidaungsu-1.3 ဖောင့်ကတော့ Apple နည်းပညာ AAT ထည့်သွင်းထား သောကြောင့် Apple ထုတ်ကုန်များတွင် အဆင်ပြေသော်လည်း Microsoft Office 2016 တွင်အဆင်မပြေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ )
မှတ်ချက်− စမ်းသပ်မှုများအရ Mac ကွန်ပျူတာ Microsoft Office 2016 တွင် ZawDecode နှင့် MyMyanmar ဖောင့် ၂ မျိုးသာ အဆင်ပြေကြောင်း သိရပါတယ်။
ဖောင့်ဒေါင်းလုဒ်ယူခြင်း။လိုအပ်သော ဖောင့်များကို www.myanmarlanguage.org , www.mcfmyanmar.org တို့တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
၁) ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီးသော ဖောင့်များကို ထည့်သွင်းရန် command + space နှိပ်ပါ။
၂) font book ဟုရိုက်၍ enter နှိပ်ပါ
၃) Font Book ပေါ်လာပါက [+] (သို့မဟုတ်) File > Add Fonts ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုမှတဆင့် ဒေါင်းလုဒ်ရထားသော Pyidaungsu, ZawDecode များကိုရွေးပြီး Open နှိပ်ပါက ဖောင့်ထည့်သွင်းခြင်း ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။
Mac ကွန်ပျူတာ တွင်ပါလာပြီးသား ဖောင့်စတိုင်ကို မနှစ်သက်လို့, အသုံးမပြုချင်လို့ ဖြစ်ဖြစ် ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
၁) Font Book ကိုဖွင့်ပါ
၂) Font Book ပေါ်လာပါက [အမှန်ချက်] ဖြုတ်ပါ (သို့မဟုတ်) Edit > Disable “ဖောင့်အမည်” Family ကိုနှိပ်ပါက အဲဒီဖောင့် ပိတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၂) [အမှန်ချက်] ပြန်တပ် (သို့မဟုတ်) Edit > Enable “ဖောင့်အမည်” Family လုပ်ပါက ဖောင့်ပွင့်ပါသည်။
Keymagic လက်ကွက် ထည့်ခြင်း
၁) www.keymagic.net/downloads တွင် Mac ဗားရှင်းကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ။
၂) ရယူပြီးဖိုင်ကို Rright Click နှိပ်ပြီး Open လုပ်ပါ။ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ ပြီးဆုံးပါက အချိန်နာရီ ဘေးရှိ လက်ကွက်တွင်ရှိမရှိစစ်ဆေးကြည့်ရှုပါ။ မတွေ့ရှိပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင် ပေးဖို့လိုပါသည်။
၁)ဘယ်ဖက် အပေါ်ထောင့်မှ Apple ပုံ > System Preferences > Language & Region > Keyboard Preferences… ကိုနှိပ်ပါ။
၂) [+] အပေါင်း လက္ခဏာ ကိုနှိပ်ပါ။ ညာဖက် စာရင်းတွင် Others, English တို့ကိုနှိပ်ကြည့်ပါက Keymagic ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ Select ရွေးပြီး Add နှိပ်ပေးပါက လက်ကွက် ထွက်ပေါ်လာပြီး အသုံးပြုရန် အသင့်ဖြစ်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
၃) Keymagic လက်ကွက်ကို ရွေးပြီးမှ မိမိ အသုံးပြုရအဆင်ပြေသော လက်ကွက်များကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ( Keymagic တွင် လူကြိုက်များသော ဝင်းလက်ကွက်, ဇော်ဂျီလက်ကွက်, မြန်စံ လက်ကွက် တို့ ပါဝင်သဖြင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးသုံးနိုင်ပါသည်။ ဇော်ဂျီလက်ကွက် ဆိုရာတွင် ဇော်ဂျီအတိုင်း ယူနီကုဒ်ကို သုံးစွဲခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်)
နောက်ဆက်တွဲ လက်ကွက် ထည့်ခြင်း
Keymagic မိမိ အသုံးပြုလိုသော လက်ကွက်များ မပါရှိပါက ဥပမာ− Myanmar3 လက်ကွက် တိုင်းရင်းသားဘာသာ လက်ကွက်များ ထပ်ထည့်လိုပါ ထပ်ထည့်နိုင်ပါသေးတယ်။ www.myanmarlanguage.org တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ လက်ကွက်ဖိုင်အမည်ကို .km2 အဆုံးသတ်ဖြင့် ရှိပါသည်။ ဥပမာ− Myanmar3.km2
အဆိုပါ Myanmar3.km2 လက်ကွက်ကို Keymagic အတွင်း ထပ်ထည့်လိုသည် ဆိုပါက ဖိုင်ကို Desktop ပေါ်တွင် ထားပေးပါ။ ပြီးနောက်
၁) Terminal ကိုဖွင့်ပါ
၂) cd desktop
၃) cp Myanmar3.km2 ~/.keymagic
အထက်ပါအတိုင်း command ဖြင့် keymagic folder အတွင်း copy ကူးထည့်ပေးအားဖြင့် မိမိ အသုံးပြုလိုသော လက်ကွက်ကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လက်ကွက်များကို shortcut ဖြင့် ရွေးချယ်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ default အနေဖြင့် control + command နှိပ်ထားပြီး space ကို လိုအပ်သလို အကြိမ်အကြိမ် နှိပ်ပါက လက်ကွက် ပြောင်းပေးပါသည်။ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်လိုပါက Open Keyboard Preferecnes.. ကိုဖွင့်ပြီး Shortcut နေရာတွင် ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
You are here: Home // Myanmar Unicode // Apple Mac ကွန်ပျူတာတွင် ယူနီကုဒ်သုံးစွဲရန်